Homeတူရကီပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ55 Samsunsamulaş '' ဘောလုံး '' ပွဲများတွင်!
03 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 55 Samsun, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေ, Institute, Samulaş, တူရကီ 0
ကို 'လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများ' 'samulaş Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဝန်ထမ်းအကြားစည်းရုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအောက်မှာကရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကိုက်ညီဖို့ရှိသည်မယ်
TAMGACI ထံမှ KICK_OFF
SAMULAŞအားဖြင့်ယူနစ်များအကြားန်ထမ်းများအတွက်ဖွဲ့စည်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲသည်မြို့တော် Belediyespor Atakum ခရိုင််ဆောင်မှုများအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ အထွေထွေမန်နေဂျာအန်နဝါ Sadat ရဲ့Tamgacı Karakartalsp 2-1 ၏Bandırmasporရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်ကိုပထမဦးဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက်ချွတ်ကန်ကြောင်း။ SAMULAŞမှ General Manager အန်နဝါ Sadat ရဲ့TamgacıHastanebaşıspလည်းကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်ပေးအတွက်နေ့ကပြိုင်ပွဲ 2-5 နဲ့တူပြိုင်ဘက်Façasporရှုံး xnumx'inc အဆိုပါဂျာစီဝတ်ဆင်နေစဉ်။
ဘောလုံးအသင်းများ၏နေ့-ရှည်လျားသောအဘို့ဆောင်သောပွဲတက်ရောက်ခြင်းအနီးစပ်ဆုံးစုစုပေါင်း 30 11 ။ 8 ပြိုင်ပွဲကိုပထမဦးဆုံးနေ့၏သင်းအတွက်ကစားနေကြသည်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရန်ပွဲသက်သေခံနေသည်။ 15 အောက်တိုဘာလ Atakum ခရိုင် Mustafa Dagestani ပြိုင်ပွဲအားကစား Complex မှာကစားပါလိမ့်မည်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေနဲ့အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲ၏ချန်ပီယံအသင်းကိုပေးအပ်ပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဖလားပြီးဆုံးလိမ့်မည်။
သူတို့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများအလွန်အရေးပါမှုပေးအဖြစ်အထွေထွေမန်နေဂျာအန်နဝါ Sadat Tamgac SAMULAŞဟု, "အားကစားချစ်ကြည်ရေး, ညီအစ်ကိုများသောငြိမ်းချမ်းရေးသည်လည်းငါတို့ရေတွင်းထဲမှာမရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးလိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဦးလှုပ်ရှားမှုဘောလုံးပြိုင်ပွဲစည်းရုံးခဲ့သောနိယာမရှိသည်။ ကျနော်တို့ကော်ပိုရိတ်သစ္စာရှိမှုနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျနော်တို့မှာအများကြီးထိုကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများဂရုမစိုက်။ သွေးစည်းညီညွတ်မှုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့SAMULAŞစီမံခန့်ခွဲမှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများအကြားစည်းလုံးမှုနှင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှု, ငါတို့သည်ဆောင်ရွက်ရန်တစ်ခုပင်အားကောင်းအဖွဲ့အစည်းကဖြစ်စေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများ၏အနီးကပ်အာရုံစိုက်မှု, ငါတို့ပြိုင်ပွဲနှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းများနှင့်ပျော်စရာယှဉ်ပြိုင်ဖို့အောင်မြင်မှုဆန္ဒရှိ "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Edirne ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပွဲ 09 / 11 / 2012 Edirne ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်စွမ်းဆောင်ရည် Edirne မြို့တော်ဝန် Hamdi Sedefçi, "ကျနော်တို့က AK ပါတီစနစ်, Edirne ၏မတ်ေတာ chp'lilik မဟုတ်, Edirne န်ဆောင်မှုစျြခွငျးမတ်ေတာရှိသည်," ဟုပြောသည်။ Edirne Selimiye ဗလီနှင့်Sedefçi၏မြူနီစီပယ်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. Serhat ပြည်ထောင်စုဟာစတုရန်းတှငျကငျြးပခဲ့တဲ့သောက်ပွဲခံစဉ် Speaking သူ 19 နှစ်ပေါင်း antebellum မြို့တော်ဝန်အဖြစ်အစေခံကပြောပါတယ်။ Edirne, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးSedefçi၏အရေးကြီးဆုံးပြဿနာများ၏တညွှန်း, ပြည်ထောင်စု 46 ဖို့ဘတ်စ်ကားများကခေါ်ဆောင်သွား Serhat ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Edirne Sismet (ETUS) အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာပြေလည်ပါလိမ့်မည်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကSedefçiပြောပြရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာ, "Edirne shell ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်အသစ်ကဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နှင့်အတူ Edirne ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်နှင့်နိုင်ငံသားများလျင်မြန်စွာရောက်ရှိပါလိမ့်မည် ...
Silk Road တူရကီကမ္ဘာ့ဖလားအဖြစ်များသည့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ 04 / 10 / 2013 Silk Road တူရကီကမ္ဘာ့ဖလားအဖြစ်များသည့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ: နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Mustafa Isen, တူရကီကောင်စီထိပ်သီးအစည်းအဝေး၏ကိစ္စကိုလာမည့်နှစ်တွင်, "ကမ္ဘာ၏တူရကီခရီးသွားလုပ်ငန်းပြဿနာများ" ဟုသူကအကြံပြုတယ်။ ပူးတွဲ၏အောက်ရှိသမ္မတအိမ်တော်တူရကီနေ့3အောက်တိုဘာလတူရကီတွင်လည်းမီးဖိုထဲဌာနချုပ်ဤအရပ်မှအဆိုပါပိုးလမ်းမကြီးတူရကီကမ္ဘာ့ဖလားယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်။ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၏နိုင်ငံတော်သမ္မတလျှင်, တူရကီကမ္ဘာကြီးအတွက်ဤနေ့၏အရေးပါမှုကိုထောက်ပြသည်။ ဥပဒေပြု၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကြောင်းပြည်နယ်၏အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၌ဤမျိုးသောရက်ကိုညွှန်းသည်မှန်လျှင်, အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့်လူထုအခြေပြုလူမှုအဖွဲ့အစည်းများကျယ်ပြန့်ပရိသတ်ကိုအသိပေးဆောင်ရွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆို ... ။
Bursa လွမ်းဆွတ်ရထားဘူတာများတွင် classical ဂီတပွဲတော် 12 / 04 / 2014 အစ္စတန်ဘူလ်, Classical Music ကိုပွဲတော်အတွက်လွမ်းဆွတ်ရထားဘူတာ: ပြင်သစ် Mudanya-Bursa Mudanya ရထားဘူတာများကကျင်းပသည့်အရည်အသွေးအစွန့်ခြင်းမရှိဘဲဟိုတယ် Montania ရှည်လျားသောနှစ်ပေါင်းအားဖြင့် operated ဖြစ်ပါတယ်။ ရာစုနှစ်တစ်ခုလွမ်းဆွတ်မှုလွမ်းဆွတ်ဘူတာရုံမှာနေထိုင်နိုင်ရန်, စားသောက်ဆိုင်, La Gare ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရထားလမ်းသူမ၏ဂီတနှင့်ကြည်နူးဖွယ်အရသာနှင့်မမေ့နိုင်သောဖျော်ဖြေပွဲချစ်တော်မူ၏။ အရည်အသွေးမြင့်ဂီတခံစားကြည့်ပါနှင့်အရသာအစားအစာ, La Gare စားသောက်ဆိုင်မှာထပ်ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်မူထူးခြားတဲ့လေထု "Montanier အဆိုပါ Quartet" တွင်ဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်သည့် Bursa အတွက်စတိုင်စားသောက်ဆိုင်၌, သင်ပျော်စရာနှင့်သင့်ဧည့်သည်များ၏အချိန်လေးကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ Flute မှနှစ်ချက်ဘေ့စ, အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ acoustic ဂစ်တာနဲ့အကော်ဒီယန်သံစုံတီးဝိုင်းသင်နှင့်အတူသင်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုနှင့်သင်၏စားပွဲပေါ်မှာမှာဖျော်ဖြေကြလိမ့်မည်။ ...
စာအုပ်ပွဲတော်ဓါတ်ရထား 28 / 04 / 2014 အခမဲ့စာအုပ်များဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့် Gaziantep တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အနုပညာနှင့်သက်မွေးသင်တန်းများ (Gamak) တွင်ဓါတ်ရထားစာအုပ်ပွဲတော်ကိုလမ်းရထားပေါ်တွင်စာအုပ်တွေဖတ်ရှုဖို့နိုင်ငံသားများအားပေးခဲ့တယ်။ မည်သူမဆိုခရီးစဉ်အတွင်းစာအုပ်ဖတ်လမ်းရထားယူပါ။ မွန်းတည့်ဆရာ, ဆရာမများနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာစတုရန်းအတွက်လမ်းရထားရပ်တန့်ဖို့ Gaziantep ရထားဘူတာကနေ GEMAK, ထိုစာအုပ်လမ်းရထားစီးခရီးသည်များမှဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ '' 100 အခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံကစာအုပ်တွေတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြန့်ဝေသောသူသည်အပလီကေးနိုင်ငံသားများကြောင်းဝမျးသာစရာကပြောသည်။ ခရီးတစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံသားများနှင့်အတူစာအုပ်တွေကိုဖတ်တဲ့သူကျောင်းသားများ, လမ်းရထားလဟဿဖြစ်သွားသောအချိန်သတိပေးစာအုပ်ခဲ့သည်ကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ တိုင်းနိုင်ငံသားတထောင်စာအုပ်တွေတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်လမ်းရထားပေါ်မှာရှိသမျှမှတ်တိုင်များမှဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ Gamak သမ္မတနိုင်ငံ Alahad, သင်သည်ဌာနခွဲ Manager ကိုMencütek ...
Edirne ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ပွဲ 09 / 11 / 2012 Edirne ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်စွမ်းဆောင်ရည် Edirne မြို့တော်ဝန် Hamdi Sedefçi, "ကျနော်တို့က AK ပါတီစနစ်, Edirne ၏မတ်ေတာ chp'lilik မဟုတ်, Edirne န်ဆောင်မှုစျြခွငျးမတ်ေတာရှိသည်," ဟုပြောသည်။ Edirne Selimiye ဗလီနှင့်Sedefçi၏မြူနီစီပယ်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. Serhat ပြည်ထောင်စုဟာစတုရန်းတှငျကငျြးပခဲ့တဲ့သောက်ပွဲခံစဉ် Speaking သူ 19 နှစ်ပေါင်း antebellum မြို့တော်ဝန်အဖြစ်အစေခံကပြောပါတယ်။ Edirne, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးSedefçi၏အရေးကြီးဆုံးပြဿနာများ၏တညွှန်း, ပြည်ထောင်စု 46 ဖို့ဘတ်စ်ကားများကခေါ်ဆောင်သွား Serhat ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ Edirne Sismet (ETUS) အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာပြေလည်ပါလိမ့်မည်အလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ ကSedefçiပြောပြရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်အသစ်ကဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နှင့်အတူ Edirne ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်နှင့်နိုင်ငံသားများ, လျင်မြန်စွာရောက်ရှိပါလိမ့်မည် ...
Silk Road တူရကီကမ္ဘာ့ဖလားအဖြစ်များသည့်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာတမ်းဖတ်ပွဲ
Bursa လွမ်းဆွတ်ရထားဘူတာများတွင် classical ဂီတပွဲတော်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: MENEMEN - စီးပွားရေးဝန်ဆောင်မှုများအလုပ်မှာ၏ရထားလမ်းဝယ်ယူရေး၏ပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအောင်တဲ့တောင်ပေါ်လမ်းမှာအကြားALİAĞA STATION ကို
ပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Uludag တက္ကသိုလ် LINE ပြောင်းလဲခြင်း
samulaşထံမှ 1 ။ စက်မှုဒီဇိုင်းအစည်းအဝေး